सरुवाका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति दिए उप सचिवले ! « NBC KHABAR
सरुवाका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति दिए उप सचिवले !
काठमाडौं । उपल्लो तहका कर्मचारीको सरुवामा बढी चलखेल हुने गरेको आरोप कर्मचारीले नै लगाउने गरेका छन् । सरुवा तथा बढुवा आँफू अनुकुल नभएपछि आँफूले घुस दिन लिन नसकेको कारण सरुवा भएको भन्ने अधिकांशको गुनासो हुन्छ । केही समय अघि वीर अस्पतालका चिकित्सक डा धुव्रराज अधिकारीले चाकडी र घुस डिमाण्ड अनुसार दिन नसकेकोले वीर अस्पतालमा नभएको भन्दै राजीनाम दिएका थिए ।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै श्रम मन्त्रालय अन्तगत श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत उपसचिव प्रेम प्रसाद सज्जेलको सरुवा प्र्रकरण विवादित बनेको छ । २ महिना अघि मात्रै निर्वाचन कार्यालय मोरङबाट श्रम कार्यालय विराटनगर सरुवा भएका उनलाई श्रम मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानमा सरुवा भएपछि उनले पनि प्रधानमन्त्री, श्रम मन्त्री देखि श्रम सचिवले आँफुलाई भित्तामा पु¥याउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनले उपत्यका बाहिरबाट श्रम अनुमति दिदाँ अनुमति अस्वीकृत भएको एउटै सिस्टमबाट देश भर जानकारी हुनु पर्ने लगाएतका माग राख्दै श्रम सचिवलाई निवदेश लेखेका थिए । यस्तै कारणहरुले गर्दा आफ्नो सरुवा भएको उनको आरोप छ । निजामति कर्मचारी ऐन अनुसार २ बर्ष भन्दा पहिला सरुवा गर्नका लागि कारण देखाउनु पर्ने भए पनि आफ्नो कुनै कारण नदेखाएकाले आँफु कानुनी बाटो खोज्ने सञ्जेल बताउँछन् ।
उनले आँफू इमान्दार भएर काम गर्दा गर्दै माथिल्लो निकायबाट भएको सरुवालाई लगाएको आरोपका बारेमा भने श्रम मन्त्रालयले के हेर्छ हेर्न बाँकी छ ।